80 लागि परिणाम angry birds
खराब piggies मृत्यु दस्तों मार्न
बुरा Piggies मृत्यु दस्तों मार्न। यो मिशन मा तपाईं आफ्नो खाडल मा छिटो आउँदै छन् भनेर शत्रुहरू सफलतापूर्वक आफ्नो मिशन पूरा गर्न काम दिन उद्देश्य जाँच्नका हटाउन सटीक हुन हुनेछ।
नराम्रो पक्षी खराब पिग्स ब्यालेन्स
सुँगुर दुवैलाई एकअर्कालाई जित्न सकेसम्म जित्न मद्दत गर्नु पर्छ। माउस क्लिक गरेर जम्प गर्न क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि चट्टानलाई यो तरिकामा लैजानुहोस्, एक समयमा प्रत्येक सुँगुरलाई जम्प गर्न। खेलमा निर्दिष्ट गरिएका वस्तुहरू सङ्कलन गर्नुहोस्, विशेष गरी अण्डा, कद्दू र चेस्टहरू। तपाईँ सँग छ
नाराज पक्षी अन्तरिक्ष युद्ध
गुस्सा पक्षी खराब Piggies सुनहरा अण्डाहरू पुनः प्राप्त गर्न पीछा। गुस्सा पक्षीहरू खराब सुँगुरको भयंकर प्रतिरोधको सामना गर्थे। तपाईं एन्जिरी पक्षीहरूलाई चट्टानबाट बच्न र Bad Piggies मा गोली नियन्त्रण गर्न माउस प्रयोग। खेलको सबै स्तरहरू पूरा गर्न प्रयास गर्नुहोस्।
क्रोधित चरा ठाउँ अन्डा
आक्रोशित चरा देखि सानो रातो चरा प्रत्येक अन्डा फसाउन मद्दत गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो माउस तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ अन्य पक्ष गर्न अन्डा फेंक साइड गर्न तर्फ देखि सार्न। केवल तीन अन्डा तपाईं तल उम्कन सक्छन्। पहेंलो अन्डा विभिन्न लाभ ल्याउन सक्छ। धेरै ई सुरक्षित
नाराज पक्षी अन्तरिक्ष रेलमार्ग
गुस्सा पक्षी अन्तरिक्ष खतरनाक रेलवे। ठाउँबाट फर्किने, गुस्सा पक्षीहरू पृथ्वीमा फर्किन्छन् र रेल मार्गमा साहसिक जारी राख्छन्, चट्टानहरूमा, तपाईं चट्टानबाट बच्न र खेलका सबै स्तरहरू पूरा गर्न माथि कुञ्जी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भाग्यले साथ दिओस्!
क्रोधित चरा piggies ठाउँ भाग्ने
उहाँले मा फन्दामा भयो बाहिरी ठाउँ बाट सानो piggy भाग्ने मद्दत गर्नुहोस्। उहाँलाई स्विंग र अन्डा सङ्कलन गर्न माउस प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईँको भाग्ने क्रममा तपाईं अधिक र ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुनेछ।
खराब piggies HD3खेल
खराब piggies तेस्रो installment अनलाइन संस्करण। रमाइलो गर!
नारायणी पक्षी रत्न ठाउँ
गुस्सा पक्षीहरूले गुफाबाट भाग्न को लागी रास्ते खोज्न रत्नहरू इकट्ठा गर्न थप ऊर्जा प्राप्त गर्न खोज्ने। चट्टानहरू जस्तै, गुफामा रूखहरू
नाराज पक्षी अंतरिक्ष कार्ट रेसिंग
गुस्सा पक्षी अंतरिक्ष कार्ट रेसिङ। गुस्सा पक्षीहरूलाई छिटो, जम्प ड्राइव गर्नुहोस्, खराब सुँगुरहरू सङ्कलन र दौड जित्नु!
क्रोधित चरा कार बदला
आक्रोशित चरा कार बदलयो। आक्रोशित चरा बाइक बदला लिन आफ्नो बाइक सबै सुँगुरहरु पराजित गरेपछि तिनीहरूले त्यहाँ अझै पनि केही सुँगुरहरु चरा 'जीवन लगभग असम्भव बनाउन बाँकी जहाँ फेला परेन। अब तपाईं अन्तमा यो conf अन्त राख्न अवसर पाउनेछन्
Take control of your favourite player and see if you can volley Real Madrid to victory against their fiercest Spanish rivals in this free online soccer game!
chima को पौराणिक कथा: जंगल बाटो
सिंह जनजाति र जंगल मा खेदे भइरहेको र वन बाढी मा, कृपया उहाँलाई उम्कन मदत, बाटोमा जनावर होसियार जंगली जनावर द्वारा खेदे भइरहेको।
Spongebob ghoul गेटर
Spongebob गरेको भन्छु, उहाँलाई फिर्ता उडान Dutchman गरेको जहाज मद्दत गर्ने एक कथा को एक भूत पायो!
बनाम परदेशी मानिसहरूलाई
परदेशी पृथ्वीमा आएका छन् र मानिसजातिको नष्ट गर्न खोजिरहेका छन्। यो युद्धमा उनीहरूले सबै मानिसहरूलाई मार्नेछ अघि परदेशी रोक्न छन्।
यो biker बाधा मार्फत धक्का र चुनौती पूरा गर्न पर्याप्त कौशल छ भनेर देखाउँछ। त्यो तिमी अंक स्कोर र चरणहरु मार्फत अघि बढाउन चाहनुहुन्छ भने यो बाइक बारेमा उहाँले थाह सबै देखाउनका छ। गति ?? दूर प्राप्त छैन तर एक misstep ग
दिदीले बक्स वितरण
दिदीले एकदम town.Everybody जाने अनुमति दिन्छ मा मानिसहरूलाई बक्से उद्धार गर्न तपाईको सहयोगको आवश्यक!
Spongebob र spaceship racers
विदेशी दौड को Spongebob प्रतियोगिताको। कृपया अन्तरिक्ष यान चयन र Spongebob तेज ड्राइव मदत, drive छिटो र धेरै IMDEX ए तपाईं थप स्कोर हो
मडागास्कर को पेंगुइन: JULIEN boogie
JULIEN आफ्नो राजकीय लूट तपाईं उसलाई मदत गर्नुपर्छ त मिलाउ गर्न चाहन्छ!